Indlu kwi-Condominium yaBucala enolonwabo olupheleleyo
Morada das Flores (Aldeia da Serra), São Paulo, Brazil
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLuis
Indlu kwi-condominium yangasese e-Aldeia da Serra kunye nee-suites ezi-3 ezine-air conditioning, ukhuseleko olupheleleyo, indawo yokuhlala kunye negumbi lokutyela, ikhitshi eligcweleyo, indawo yokuhlamba impahla, indawo ye-gourmet epheleleyo, i-swimming pool, i-sauna kunye negaraji yeemoto ezi-4. Kufuphi nendawo yorhwebo kwilali yaseSerra.
Lo mmandla unamahlathi kakhulu kwaye unokhuseleko olupheleleyo, kufutshane neSão Paulo (i-25 km ukusuka eMarginais Pinheiros naseTiete) kunye ne-15 km ukusuka kumbindi we-Alphaville.
Indlu ixhotyiswe ngokupheleleyo kwenye yezona khondomu zibalaseleyo kulo mmandla ngokhuseleko lweyure ezingama-24, izitrato ezizolileyo, ukuphumla okupheleleyo, umoya omtsha kunye nokuzola. Indawo yeGourmet ixhotyiswe ngedama lokuqubha kunye nesauna, kunye nemfihlo epheleleyo.
I-Aldeia da Serra yindawo enelungelo lendalo kunye nokhuseleko, kunye nazo zonke izakhiwo zentengiso kunye nomgangatho wokuqala kunye kufuphi ne-São Paulo, malunga neekhilomitha ze-25 ukusuka kwiindlela ze-Tiete kunye ne-Pinheiros, kunye ne-12 km ukusuka kumbindi we-Alphaville.
Gosto de viajar, conhecer lugares e correr maratonas
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Morada das Flores (Aldeia da Serra)